Ahoana ny fomba ahazoanao ny ankamaroan'ny fampandrenesanao amin'ny iOS 12
Miaraka amin'ny fampidirana ny iOS 12, Apple dia mitondra fiovana tsy misy dikany raha ilaina amin'ny fampiasan'ny olona ny iPhones. Ho an'ny iray, misy fanavaozana ao amin'ny Fehezanteny Notifications izay manome ny mpampiasa kokoa hifehy ny fampandrenesana azy ireo. Ny fampandrenesana dia azo zaraina ho toy ny karazana app sy senders. Ity lahatsoratra ity dia hitarika anao amin'ny fomba hahazoana ny ankamaroan'ny fampandrenesanao ao amin'ny iOS 12.
Ny fampandrenesana dia manampy ny mpampiasa hahafantatra momba ny hafatra, ny vaovao ary ny zavatra hafa izay eritreretin'ireo mpandrindra app ireo. Na izany aza, be loatra ny zavatra mety ho ratsy. Raha nametraka fampiharana fampahalalam-baovao sosialy sy fampiharana hafa momba ny fampitam-baovao ianao ao amin'ny iPhone anao, dia manantena ianao fa hanana sora-baventy ny fampandrenesana aorian'ny ora tsy hijerena ny iPhone. Ny tranga toy izany dia mety manelingelina sy tsy mahasoa ny olona sasany. Raha ny marina, a Ny fianarana dia naneho fa ny fampahafantarana dia mitaky loharano manintona noho izany dia manakorontana ny mpampiasa sy manimba ny vokatra aterany. Apple dia mino fa tokony hifehy kokoa ny fampandrenesana azy ireo mpampiasa - amin'ny fampidirana ny fampandrenesana kokoa amin'ny iOS 12.
Ahoana ny fametrahana ny fampandrenesana amin'ny iOS 12
Ny fianarana ny fomba hahazoana ny ankamaroan'ny Notifications ao amin'ny iOS 12 dia hanome anao ny fanaraha-maso tsaratsara kokoa ny fampandrenesana iPhone anao. Azonao atao ny misafidy ny hanana fanamafisam-peo madio, fanesorana sy manala ny fampandrenesana, na manao fanovana amin'ny fomba fampandrenesana. Ireo rehetra ireo dia resahina ao amin'ny fizarana etsy ambany.
Mampiasà fampandrenesana vondrona amin'ny iOS 12
Ny fampandrenesana vondrona dia ahafahanao manangona fampahafantarana misimisy avy amin'ny apps, ny karazana app, na ny mpandefa. Azonao atao ny misafidy ny hampahafantatra ny fampahafantarana rehetra ho an'ny fampahalalam-baovao sosialy amin'ny karatra fampahafantarana iray, na manana karatra manokana ho an'ny app manokana - Facebook, Facebook. Azonao atao ihany koa ny manangona fampandrenesana mifototra amin'ny sendere.
Ireo rehetra ireo dia azo atao amin'ny fandehanana any amin'ny pejy Notifications ao amin'ny Settings'ny iPhone anao. Azonao atao ny manamarina ny lahatsoratra amin'ny antsipiriany Ahoana ny famoriana ny fanamafisana ny iPhone amin'ny iOS 12.
Miezaha hifantina tsy tapaka amin'ny iOS 12
Ny fampisehoana tsy an-kiato dia ahafahan'ny mpampiasa manao fiovana haingana amin'ny fomba fitondran'ny fampiharana. Ankehitriny, tsy voatery mandeha any amin'ny Settings ianao ary manitsy ny fampandrenesana an-tanana tsirairay. Ankehitriny, azonao atao ny manova ny fampiasana fampiharana amin'ny fampiharana rehefa miseho ao amin'ny Notification Center na Lock Screen.
Ny lahatsoratra feno Ahoana ny fomba fampiasana ny fikandrana instant amin'ny iOS 12 tokony hitarika anao amin'ny fomba fampiasana ny endri-javatra ao amin'ny iPhone anao.
Avelao ny fampandrenesana mivaingana ao amin'ny iOS 12
Azonao atao ny mametraka fampandrenesana maimaika hanohizana ny fampandrenesana ireo fampiharana manokana na dia Aza manelingelina dia ampidirina ao amin'ny iPhone. Ny fampitandremana mahery vaika dia manitsaka ny faneriterena ny tsy fanelingelenana ny paikady ho an'ny antony tsotra sy mazava - misy fanakianana amin'ny fiarovana, fahasalamana ary fiarovana.
To manaova fanamafisana krizy, mila fotsiny ny safidy fampandrenesana app ao amin'ny Settings.
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy ny fampandrenesana maimaika amin'ny ankamaroan'ny apps - na dia heverinao fa ilaina ny fampiharana amin'ny fampandrenesana kritikiana. Ireo mpikirakira dia mila mangataka alalana avy amin'i Apple noho ny fampiharana azy ireo ahazoan-dàlana amin'ny fampandrenesana Critical.
Hamarino ny fotoana fanamarinana
Ny iPhone dia mamela anao hanara-maso ny isan'ireo fampahafantarana azonao mandritra ny vanim-potoana iray. Ankoatra izany dia azonao atao ny fampiharana izay tianao handefa hafatra. Ny endri-javatra dia mampiseho antontan'isa manan-danja toy ny fizotry ny fotoana miaraka amin'ny isan'ny fampahafantarana isaky ny ora ary ny salam-paritra fampahafantarin'ny telefaona isaky ny ora.
To Jereo ny fotoana fanamarihana ny fanamarihana, mandeha Home> Settings> Time Screen.
Ampidiro ny fampahafantarana kokoa ao amin'ny iOS 12
Ny iOS 12 dia manohana ny vaovao farany. Ho an'ireo mpandrindra app dia midika izany fa afaka manangana fanamarihana mifandray amin'ireo mpampiasa izy ireo ankehitriny. Ny fampahafantarana mafonja dia mamela ny traikefan'ny mpampiasa tsy misy dikany. Alao sary an-tsaina hoe afaka mamaly hafatra any amin'ny tonta Notifications raha tsy mandeha any amin'ny app.
To ampiasao ny fampahafantarana matanjaka kokoa, mila ampidirinao fotsiny ny fizarana fidirana amin'ny fampahafantarana mafonja. Mariho fa, amin'izao fotoana izao, apps vitsivitsy ihany no manohana ny fampahalalam-baovao mafonja.
F: Narahiko ny dingana nataoko fa tsy hitako ny safidy momba ny fampandrenesana.
A: Mila manafaingana ny fampahafantarana aloha ianao vao afaka mahita ireo safidy. Raha toa ka nesorina ny fampandrenesana, ny safidy hafa rehetra dia tsy voafehy ary tsy misy.
F: Azoko atao ve ny mamela ny fampandrenesana rehetra ho an'ny fampiharana rehetra indray mandeha?
A: Na dia tsara aza ny hevitra ary mety ho madio, i Apple dia mihevitra fa tsara raha tsy maintsy mamela ny safidy tsirairay amin'ny tanana tsirairay ianao.
F: Nahoana aho no tsy afaka mahita ny safidy vaovao momba ny iPhone?
A: Ny endri-tsoratra vaovao dia azo ampiasaina amin'ny iPhones sy iPads ihany ao amin'ny iOS 12. Raha eo amin'ny dikan-teny ambany kokoa amin'ny iOS ny fitaovana misy anao, dia tsy misy ny fitaovana ampiasainao.
Vao nianaranao. Ahoana ny fomba hahazoana ny ankamaroan'ny fampandrenesanao ao amin'ny iOS 12. Raha manana fanontaniana momba ny iray amin'ireo dingana etsy ambony ianao, dia ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana tsetsatsetsa.
Heverinao ve fa manampy ity lahatsoratra ity? Avy eo, zarao ity lahatsoratra ity miaraka amin'ny namanao amin'ny kaonty media sosialy.
free download udemy mandoa vola
Ny iPhone 7 dia afaka manana fitoeran-dilo SIM ho fampiasana miaraka amin'ny mpitatitra marobe
Ny fivoahana vaovao dia manamafy ny Internet Internet Speed ​​6S
Mitohy ny iPhone na ny iPad? Toy izao ny fomba hamahana azy io!
Ahoana ny fetezana (na hamadihana) ny fomba fijerin'ny fijerin'ny iPad amin'ny 6 Plus sy 6s Plus an-trano
Fandefasana App Store: Toro-tànana ho an'ireo mpamorona rindrambaiko
Palm Now dia manana telefaona madinika
Ny Super Mario Run Nintendo dia tonga amin'ny iPhone 7
App Weather: The guides ultimate
Tags:Apple Inc iOS iPhone Hafatra (rindrambaiko) Mobile fampiharana Fitaovana finday Notification Center
Server fitaovana finday nbsp HTTPS fitaovana "PC lalao rindrambaiko GNOME Chrome Rafitra fikirakirana MAMAKA Microsoft Windows Windows Phone USB taona Apple Watch Users Command Fitaovana finday 04 SSH Toetoetra Facebook web server fikarohana Malagasy Bible File Android Apache web browser CentOS SEO 'App tahirin-kevitra bilaogy PHP afa-po famerenana OS X Cortana Linux Ubuntu Systems Plugins Ubuntu 14.10 WordPress vaovao farany Windows 8 Screen Phone raki-daza lalao PDG One ' rafitra API bilaogy Ubuntu 16 PPA Nginx loharano misokatra Linux fitaovana Samsung Galaxy Windows 10 haino aman-jery sosialy app store Bing IP adiresy Unité centrale Firefox Time hametraka Debian Twitter takelaka fikirakirana windows update toe-tsaina Support CentOS 7 Up " ram ubuntu 15.04 command line Database MySQL fitaovana Unix fifamoivoizana finday avo lenta SSD Plugin Apps Microsoft iPhone fanamarinana Google Video paoma famotsorana Company endri-javatra HTTP Ubuntu 14.04 Samsung HTML 10 Performance Windows Ubuntu YouTube Linux Mint